CAYAYAANKA SPIDER EE LAGU KORIYO, DAAWEYNTA AQALKA DHIRTA LAGU KORIYO EE GUGA IYO DAYRTA CAYAYAANKA IYO CUDURRADA - DHISMAYAASHA
Cayayaanka ee lagu koriyo iyo dagaalka iyaga ka gees ah: Caarada caarada
Beerta aqalka dhirta leh waxay fursad weyn u tahay in ay leeyihiin miro iyo khudaar cusub miiska ku dhawaad ​​sanadka oo dhan.
Sidoo kale waa dammaanad qaadashada cuntada ecologically ee saafiga ah iyada oo aan lahayn nitrates waxyeello, noocyo kala duwan oo suurtagal ah iyo hormoonnada koritaanka.
Faa'iidooyinka sii kordhaya ee lagu koriyo oo laga yaabo in lagu qoro si joogto ah: goosashada hore ee gu'ga, awooda lagu abuuro noocyo naadir ah dhirta iyo ubaxyada aan ku noolaan karin dhulka u furan xaaladaha cimilada aan habboonayn. Wixii koritaanka wanaagsan ee dalagyada iyo goosashada hodan ah ee lagu koriyo, heerkulka sare iyo qoyaan waxaa si joogto ah loo hayaa.
Khatarta ah in beeraha aqalka dhirta lagu koriyo waa baakteeriya soo saaraan jawi qoyan oo leh xawaare aan fiicnayn iyo dulinka cayayaanka. Bakteeriyadu waxay keentaa cudurrada dhirta oo badan. Cayayaanka ayaa awood u leh inay waxyeello u geystaan ​​cunista geedo, ubax, caleemo, berry bisil iyo miraha dalagyada khudradda.
Marka ugu horeysa waxay u egtahay in dhirta ku jirta aqallada dhirta lagu raaxeysto ay ku jirto raaxo iyo amaan buuxda. Laakiin ma aha. "Dhibaato" dhab ah oo loogu talagalay koriyo waa cayayaanka waxyeello leh.
Dadaal dariiqa ah si aad uga hesho jidka u dhow diirimaadka iyo cuntooyinka delicious, waxay awoodaan in ay gebi ahaanba iyo waqti gaaban si ay u burburiyaan shaqada oo dhan ee bannaanka iyo bannaanka u. Kuwa ugu caansan waa: caarada caarada, caarada, caleenta, caleemaha, qoryaha, safarada tubaakada, weevil, lafil, marshills, baradho baradho ah.
aphid - Cayayaanka yaryar (laga bilaabo 1 ilaa 7 mm dherer). Midabka jirka wuxuu ku kala duwan yahay huruud-cagaar ilaa mugdi, ku dhowaad madow. Aphids si dhakhso ah ayey u dhuftey. Marmarka qaarkood waxay degeen geedka gumeysiga oo dhan. Waxaad arki kartaa indhaha qaawan. Dhaqannada ugu xiisaha badan - hoose ee caleemaha yar yar, burooyinkeeda, stem (talooyin). Warshad leh infekshinka aphids waxay isu beddeshaa jaalle (aphid nuugaan casiir ka caleemo), oo engegaya, oo sii socdaa koritaanka. Tamaandhada, qajaarka, eggplants waxay ku raaxeeysataa jacayl gaar ah cayayaanka;
Isku dayga sigaarka. Dhererkeedu waa 1 mm oo keliya. Dumarka cayayaanka waxay ku yimaadaan midabyo kala duwan - laga bilaabo cawl-jaale ilaa madow. Labada ragga iyo dumarku waxay leeyihiin baalashyo ay ku xardhan yihiin "fringe." Goobo badanaa waxay dhigtaa ukumo ku taal bannaanka caleemaha dhirta. On caleemaha saameeyeen, meelaha iftiinka hore u muuqdaan, si tartiib tartiib ah meelahaasi waxay noqdaan bunni midabka, qalalan iyo qadhaadh, sameysaan godad. Thrips waxay jecel yihiin eggplants iyo basbaaska;
qoryaha. Cabbirka cayayaanka - 10-12 mm. Waxay si fiican u soo saari kartaa xaaladaha qoyaan badan, sidaas awgeed cimilada aqalka dhirta lagu koriyo ayaa si gaar ah ugu roon. Waxay dhaawici karaan dhirta adoo guntay godadka caleemaha qaababka kala duwan ama qulqulka ku wareegsan geesaha. Ha iska aamusin yaanyada iyo qajaarka;
slugs. Tani cayayaan this ee beeritaanka cagaaran si fudud loo keeni karaa gudaha gudaha lagu koriyo leh ciidda. Slugs leh raaxo cunaan strawberry, kaabajka, yaanyo, geedo digir. Cunto-qabashadoodu waa mid khusaysa. Mid ka mid ah fadhiya, waxay awoodaan in ay baabbi'iyaan ku dhowaad dhammaan caleemaha beerta. Slugsku waa bakteeriyada noocyada kala duwan ee loo yaqaan 'pathogenic pathogenic pathogenic' kuwaas oo dhaawici kara dhirta sida ugu badan ee ay u sameeyaan;
caarada caarada. Cayayaanka xun. Cabbirka jidhkiisu waa 1-2 mm. Midabkiisu waa ka duwan yahay. Ticks waa caano, oranji, jaalle iyo casaan. Ticks waxay ku dhufanayaan xawaaraha shidaalka iyo waqti yar ka dib oo ku faafi karo inta lagu guda jiro aqalka dhirta lagu koriyo. Waad ogaan kartaa adigoo adeegsanaya dhibicda dhibicda ku taal caleenka iyo shabakad khafiif ah oo isku dhejisa dusha sare ee caleemaha iyo walxaha;
whitefly (balastarka cagaaran ee madow). Noocyada ugu caansan waa aqalka dhirta lagu koriyo ama aqalka dhirta loo yaqaan "whitefly", kaabash cad. Dhererka cayayaankaasi kama badna 3-4 mm. Baalalka balastaradu waa caddaan waxayna ku daboolan yihiin nooc daboolan. Khataraha dhirta ma aha mid aad u caan ah, iyaga oo soo saaraya qaabka lakabada quruxda badan, oo ay daboolaan dusha caleen. Xayeysiinta ayaa ka xanaajisa horumarinta fungusto soot, taasoo dhaawici karta geedka iyo xitaa burburin karta;
weevil. Kuwani waa lamidyo yaryar oo midab madow ah oo leh maqaar dheer. In lagu koriyo oo inta badan ku noolaan jiray weevil raspberry-strawberry. Cayayaanka wuxuu cunaa burooyinkeeda, ubaxa, caleemaha, jilif iyo xididdada dhirta;
siisay. Calaamad muujinaysa joogitaankooda aqalka dhirta lagu koriyo - waa caleemo qulqulaya webka. Cayayaanka laftoodu waxay isku hayaan gudaha caleen sidan oo kale ah;
Colorado baradho baradho. Caadi ahaan, baradho-baradho Colorado "indho indhaha" beeralayda sariiraha leh baradho, laakiin badanaa waxay galaan koriyo. Waxay leedahay midab dabeecad leh: midab hurdi oo leh jilbaaxo madow. Soo jiido yaanyada aqalka dhirta lagu koriyo, basbaaska iyo ukunta.
The cadowga ugu weyn ee dhirta aqalka dhirta lagu koriyo
Ka mid ah cayayaanka waxyeello laga helay lagu koriyo khatarta ugu weyn waa caarada caarada.
MUHIIM! Natiijada nolol ka mid ah caarada caarada, dhirta ayaa si buuxda u dhinta!
Muuqaalka caarada caarada ee lagu koriyo waxaa lagu ogaan karaa waxyeelada calaamadaha ah ee caleemaha bukaan-socodka. Dhibicda dhibco cad ayaa ka muuqata dusha sare ee caleen, iyo ka dib muddo yar oo shabakad ah oo cayayaanka u dhaqaaqa.
Caarada caaradu waxay ku dhuftaa si aan caadi ahayn. Dumarku way firfircoon yihiin, waxayna ukumi karaan ukumaha 300-400 kasta. Intaa waxaa dheer, kalluunka dheddiguhu waa laba nooc: hal nooc oo ah noocyada noocyadda xilliga xagaaga oo dhan, kan kale ayaa u muuqda xilliga dayrta, xilliga dayrta, ukunta guga. Sanadkiiba wareegyada horumarinta ee khariidadu waxay ka dhacaan 20 iyo wax ka badan. Cimilada hawadu waxay u tahay janno cayayaankaas.
Inta lagu jiro mudadaas marka caaradu ay ku dhacdo oo keliya geed, waxay dhaawici doontaa dhammaan caleemaha. Ka dibna, sii kordhinta sare ee afkoda, cayayaanka waxyeello baabi'iyo caleemaha yar yar iyo miraha. Casiir jilicsan - cuntada ugu weyn ee caarada caarada. Caleemaha qallajiya oo qalalan, u dhintaan, dhirtu way dhinto.
Caawin! Si si guul ah loola dagaallamo caarada caarada ee lagu koriyo, waa in la ogaadaa dhacdadii marxaladda hore. Guga, haweenka ma laha waqti ay ku beddelaan midab, si ay si muuqata u muuqdaan isha muuqaalka ah ee hoose ee caleemaha.
Dagaalka cayayaankaan waa mid aan mahadnaq lahayn. Mite waxay si dhakhso ah ugu habboon tahay noocyo kala duwan oo kiimikooyin ah, sidaas darteed daaweynta xeryahooda sunta ah waxay sababi karaan waxyeelo badan oo dhirta ka yimaada miisaanka laftiisa. Bannaanka iyo beeralayda badankood waxay abuuraan siyaabo u gaar ah oo looga takhaluso caarada caarada iyo iyagoo si ikhtiyaari ah ula wadaagaya waayo-aragnimadooda khuseeya internetka.
Halkan waxa ku yaal habab gaar ah oo wax ku ool ah:
qoyaan badan. Mite uma dulqaadan karo qoyaan badan, sidaas darteed aqalka dhirta lagu koriyo waa in uu ahaado mid sare (85%);
isbeddelka dhaqamada. Cayayaanka cayayaanka ayaa si liidan ugu yareeya yaanyada, khudradda uu jecel yahay qajaar, waa in la beddelo si loo beddelo beeritaanka dalagyadaas;
In lagu koriyo karaa si ay ugu noolaadaan phytoseiulus ama aboor ku dhaganwaayo caarada caarada waa cunto. Waxaad ka iibsan kartaa cayayaankaan nooc kasta oo xuduud ah;
ka hortagga. Si looga hortago kharajka saxda ah, waxaa lagama maarmaan ah in si taxadar leh loo baaro caleemaha dhirta. Haddii la ogaado bay'ada, ka saar caleemaha saameeya dalagyada iyo gubi. Waqtiga si aad uga baxdo oo iska tuur qashinka laga bilaabo aqalka dhirta lagu koriyo (caarada caaradu waxay inta badan ku dul rusheeyaa haramaha sababtoo ah maqnaanshaha raashinka kale).
Haddii hababkaasi ay u muuqdaan kuwo aan awood lahayn oo ka soo horjeesanaya caarada caarada caarada, waxaa habboon in la qaado tallaabooyin xakameyn ah oo adag:
ku buufinta sulfur colloidal. Kala saar 80 grams oo baaruud ah baaldi biyo ah, ku buufin dhirta 10-15 maalmood;
"Bitoxibacillin". 100 garaam oo budo ah oo baaldi biyo ah. Ku buufin dhirta saameeya 10-15 maalmood oo kasta;
Haddii caaradu ku faafto dhammaan dhismooyinka aqalka dhirta lagu koriyo, buufinta waa in la sameeyaa marar badan - 5-7 cisho kasta.
Xaaladaha ba'an, waa inaad isticmaashaa kiimikada:
Markaad isticmaalayso kiimikooyinkaas, waa inaad si cad u raacdaa tilmaamaha xirmada.
MUHIIM! Daroogooyinkaasi waa sun. La shaqee iyaga waa in lagu sameeyaa suunka difaaca, muraayadaha iyo galoofyada.
Dhibaatooyin la taaban karo ayaa lagu hanjabaa muuqaalka quraanjada ee aqalka dhirta lagu koriyo. Cayayaankaasi yaryari waxay si weyn u waxyeeleyn karaan nidaamka xididka dhirta. Joogitaankooda aqalka dhirta lagu koriyo waxaa lagu ogaan karaa madow yar oo carrada iyo cayayaanka naftooda, marmar muuqata dusha sare.
Waxaa jira siyaabo badan sida looga takhaluso quraanjada ee lagu koriyo. Waxaa habboon in la isku dayo in uu la qabsado "karbaash", iyada oo aan u adeegsanayn daaweynta kiimikada, si aanay u waxyeelayn dhirta iyo ciidda.
Siyaabaha dadweynaha ee looga takhaluso quraanjada:
toonta. Qudhaanku uma dulqaato urta toonta cad oo u muuqata inay ka baxdo qolka uu joogo. Cinjirrada tufaaxa waa in la gooyaa wadooyinka marinka, iyo sidoo kale godadka;
borax Xaydha oo lagu daro walaxdan burbursan ayaa la gooyaa karaa dhinacyada kala duwan ee aqalka dhirta lagu koriyo. Si arrintan loo sameeyo, waa in hilibka duqadda ah la kariyaa waa in lagu daraa nus shaaha oo ah borax;
ash kulul. Ku daadi dambaska mowjada iyo dariiqyada ant;
miyir qabow. Qudhaanjadu aad bay u jecel yihiin masago, laakiin ma awoodaan inay dheefaan waxayna u dhintaan caloosha. Groats waxay u baahan tahay in ay ku rusheeyeen hareeraha minkeeda iyo wadooyinka cayayaanka.
Haddii hababka kor lagu taxay ma siinayaan saameynta la rabay oo marinka qorraxdu sii wadaan si degan u socodka kuleylka, waa inay isticmaalaan diyaarinta kiimikada. Gaar ahaan waxtar u leh dagaalka ka dhanka ah cayayaanka daroogada xashiishka "Thunder" iyo kaabashka cayayaanka "Absolute".
Sidee iyo waxa loo daaweynayo aqalka dhirta lagu koriyo ee guga caarada caarada? Bannaanka iyo aqoonyahannada waaya-aragnimada leh waxay ku talinayaan in lagu koriyo oo lagu beero xilliga dayrta iyo ka dib goosashada ama guga kahor intaadan beerto geedo.
Ka hor inta nidaamka jeermi-tirinta, aqalka dhirta lagu koriyo waa in lagu dhaqaa gudaha iyada oo leh joodar xoog leh oo tuubo leh oo leh qiyaas adag oo saabuun. Gaar ahaan si taxadar leh u maydhay qaybaha derbiyada, armaajooyinka iyo roogagga.
Waxaa jira habab badan oo loogu talagalay daaweynta aqalka dhirta lagu koriyo ee guga lid ku ah cayayaanka iyo cudurrada. Intooda badani waa sun, laakiin tani looma diidi karo, maaddaama dawooyinkan ay yihiin kuwo ugu waxtarka badan:
Baaraha sulfur. Si looga takhaluso cayayaanka iyo ka hortagaan dhacdooyinkooda kale inay gacan ka geystaan ​​baaruudda bollard (aan lagu talineynin dhismayaasha leh sagxadaha birta ah) Kubadda waxaa lagu rakibayaa gabal bir ah, dab la qabadsiiyay. In lagu koriyo inta lagu jiro nidaamkan waxaa lagama maarmaan ah in la xiro albaabada iyo hawada si adag. Waxaa si adag loo mamnuucayaa in qolka lagu dhex jiro inta lagu jiro jeermiska. Waa in lagu kor xiraa 24 saacadood.
Copper sulfate. Mid ka mid ah hababka ugu waxtarka badan ee jeermi-dilista waa daaweyn leh sulfate copper. 2 qaado oo ah fitamiin, saabuun (cawska nastrogat) ayaa lagu qasi jiray 10 litir oo biyo ah. Dhamaan dhinacyada qolka waxaa lagu daaweeyaa Halabadan. Ka dib, in ciidda ee lagu koriyo daadiyaan "Fitosporin". Dhulka, humus ee lagu koriyo waa in la geliyaa ka hor inta aan la samayn.
Fiidiyowgu wuxuu kaa caawin doonaa inaad aragto sida iyo sida loo daaweeyo aqalka dhirta lagu koriyo xilliga gu'ga ama dayrta laga bilaabo cayayaanka iyo cudurrada:
Waa wax aad u fudud in laga hortago muuqaalka cayayaanka waxyeellada leh ee lagu koriyo ka badan inta laga tirtiro iyaga muddo dheer iyo mararka qaar aan lagu guuleysan, sumaynaya ciidda iyo goosashada mustaqbalka ee kiimikooyin kala duwan. Waa ku filan in lagu nadiifiyo aqalka dhirta lagu koriyo, adeegso keliya ciidda tayada leh ee la xaqiijiyay, badiyaa bedelaya lakabka ciidda.